ဝါစိမ်းနီ တပ်ပေါင်းစုရဲ့ Antioxidant စွမ်းအား | OnDoctor
ဝါစိမ်းနီ တပ်ပေါင်းစုရဲ့ Antioxidant စွမ်းအား
By Wai Yan Lin	 On Mar 13, 2020 Last updated Mar 16, 2020
ကလေးတွေသိပ်သဘောကျတဲ့ Nursery Rhyme သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။
Do you like broccoli?(ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကြိုက်လား) လို့မေးတော့ ကလေးလေးက ပြုံးပြီးပြန်ဖြေတာ Yes I do (ကြိုက်တယ်..ကြိုက်တယ်)ပေါ့။
Do you like ice cream(ရေခဲမုန့်ကြိုက်လား)ဆိုတော့လည်း ပြုံးပြုံးလေးပြန်ဖြေသေးတယ် Yes I do ပဲပေါ့။
ရေခဲမုန့် မကြိုက်တဲ့ကလေးဆိုတာ ဒီကမ္ဘာမှာ ရှားပါးပစ္စည်းမဟုတ်လား။
Do you like broccoli ice cream? (ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းရေခဲမုန့် ကြိုက်လား) လည်းဆိုရော ချက်ချင်းရှုံ့မဲ့ပြီး လက်ကာတယ်။
No I don’t, yucky! (မကြိုက်ဘူး..အော့အော့)ပေါ့။
ဘယ်လိုပဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရသာရှိတဲ့ အစားအသောက်နှစ်ခုဖြစ်ပါစေ ဘယ်လိုမှ အဆက်အစပ်မရှိတဲ့အခါမှာ ပေါင်းစပ်ပစ်လိုက်လို့ မဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ ကျန်းမာရေးကို အရမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ တချို့ဓာတ်စာတွေမှာလည်း ပေါင်းစပ်စားသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ တစ်ခုတည်းစားသောက်တာထက် အဆပေါင်းမြောက်များစွာ အကျိုးရှိစေပေမဲ့ အစားအသောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှတွဲစားလို့မရတာ..တွေးကြည့်တာနဲ့တောင် ကြက်သီးထသွားလောက်တဲ့ အတွဲအစပ်မျိုးတွေရှိပါတယ်။
ခုနက ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း(Brocoli) ကို လက်ဖက်စိမ်း(Green Tea) ၊ နနွင်း(Tumeric) ၊ သလဲသီး (Pomegrenate) တို့နဲ့ ပေါင်းပြီး စားစရာတစ်ခုလုပ်ကြည့်ပါ။
စားကြည့်ဖို့ အတွေးနဲ့တင် အသည်းယားသွားတယ်မဟုတ်လား။
ဒါပေမဲ့ Super food လို့ခေါ်နိုင်တဲ့ ဒီဓာတ်စာ(၄)မျိုးကိုပဲ ဆေးတောင့်လေးတစ်ခုထဲမှာ ပေါင်းစပ်ထည့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အံ့အားသင့်စရာ အာနိသင်တွေရနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။
ပေါင်းစပ်လိုက်လို့ ဖြစ်သွားမဲ့ စူပါပါဝါတွေအကြောင်း မပြောခင် တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အစွမ်းသတ္တိလေးတွေကို နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ရအောင်။
နနွင်းကို ဂျင်းအနွယ်ဝင် Tumeric အမြစ်ကနေ ထုတ်လုပ်ပြီး ရောင်ရမ်းမှုတွေကို လျော့ပါးစေတဲ့ Curcuminoid ပါဝင်မှုကြောင့် ဆေးဖက်ဝင် ဓာတ်စာတစ်ခုအနေနဲ့ရော ဟင်းခတ်အမွေးအကြိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ပါ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
နနွင်းမှာ ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ ကယ်လိုရီ၊ အသားဓာတ်၊ သကြားဓာတ်အနည်းငယ်၊ အမျှင်ဓာတ်၊ အဆီဓာတ်နဲ့ ကစီဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။
စိတ်ကျရောဂါ ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ တုပ်ကွေးနဲ့ အခြားသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ၊ ရာသီမလာခင်ဖြစ်တတ်သည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ၊ ကိုလက်စထရောလ်များခြင်း ၊ အလ်ဇိုင်းမားရောဂါ ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါ ၊ Irritable bowel syndrome ရောဂါ ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ ဝက်ခြံပြဿနာ စတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကင်ဆာဆဲလ်တွေရဲ့ ပွားနှုန်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ကိုယ်တွင်းအဆိပ်အတောက်ဖယ်ရှားပေးမဲ့ အင်ဇိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်းစမ်းသပ်မှုတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကတည်းက အီတလီနိုင်ငံမှာ စတင် စားသုံးခဲ့ကြပါတယ်။
ဗိုက်တာမင် စီ၊ ဗိုက်တာမင်ကေ ၊ ဖောလစ်အက်ဆစ်စတဲ့ ဗိုက်တာမင်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်နဲ့ ပိုတက်စီယမ်လည်း ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။
ဗိုက်တာမင်စီကြောင့် ကိုယ်ခံအားတက်စေသလို ကော်လာဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း အားပေးပါတယ်။
ဗိုက်တာမင်စီရဲ့ antioxidant ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် ကင်ဆာလိုရောဂါမျိုးတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လက်ဖက်စိမ်းကို လွန်ခဲ့နှစ်ရာပေါင်းများစွာကတည်းက တရုတ်ပြည်မှာ စတင်သောက်သုံးခဲ့ကြပြီး ယနေ့ခေတ်မှာတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အနှစ်ခြိုက်ဆုံးအစားအသောက်တွေထဲက တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။
ကျန်းမာစေတဲ့ Bioactive compounds တွေပါဝင်တဲ့အပြင် Antioxidants ကြွယ်ဝစွာပါဝင်မှုကြောင့် ကင်ဆာတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး လူကိုတက်ကြွရွှင်လန်းစေပါတယ်။
ကိုယ်တွင်းက မကောင်းတဲ့အဆီတွေကို ပိုလောင်ကျွမ်းစေပြီး အဝလွန်ခြင်း၊ ဆီးချိုနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေ မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သလဲသီးဟာ အရသာရှိတဲ့ အသီးအနှံတစ်ခုဖြစ်ရုံမကဘဲ တကယ့်ကိုဆေးဖက်ဝင် အသီးတစ်ခုလို့ပါဆိုရပါမယ်။
အမျှင်ဓာတ်၊ ပရိုတင်းဓာတ်၊ ဗိုက်တာမင်စီ၊ ဗိုက်တာမင်ကေ၊ ဖောလစ်အက်ဆစ်၊ သကြားဓာတ်၊ ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ ကယ်လိုရီ စတဲ့ တန်ဖိုးရှိအာဟာရဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။
Puniclagin ဆိုတဲ့ စွမ်းရည်အမြင့်ဆုံး Antioxidant ပါဝင်တဲ့အတွက် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာစတဲ့ ကင်ဆာအမျိုးမျိုးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ အဝလွန်ခြင်း၊ ပန်းသေပန်းညှိုး နဲ့ အလ်ဇိုင်းမားလိုရောဂါတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဝါ၊စိမ်း၊နီ တပ်ပေါင်းစုကို ဆေးတောင့်တစ်ခုထဲ ထည့်သွင်းခြင်း(သို့မဟုတ်) POMI T
ကုန်ကြမ်းတွေအားလုံးကို မျှတတဲ့မြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတုရှိတဲ့ အီတလီနိုင်ငံစိုက်ခင်းတွေက ရယူထားပြီး အီတလီနိုင်ငံမှာပဲ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှု ပြည့်ဝဖို့ သေချာပါတယ်။
နနွင်း၊ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊လက်ဖက်စိမ်း နဲ့ သလဲသီးတို့ရဲ့ အစွမ်းထက် အာနိသင်တစ်ခုချင်းစီအပြင် ပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့် Antioxidant အာနိသင်တွေ ပိုမိုစွမ်းရည်အဆတိုး မြင့်မားသွားပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်စွမ်း ပိုမြင့်သွားစေပါတယ်။
လူကြီးမိဘတွေအတွက် မှတ်ဉာဏ်နဲ့ ကိုယ်ခံအားပိုမိုမြင့်တက်လာစေပါတယ်။
နာတာရှည်ရောဂါတွေရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ပိုခံနိုင်ရည်ရှိလာစေပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ နှလုံးကျန်းမာရေးကို အားပေးခြင်း၊ အသက်ရှည်စေခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားကို ကောင်းမွန်စေခြင်း စတဲ့ အာနိသင်တွေနဲ့ ပြည့်ဝတာကြောင့် မဖြစ်မနေ ဆွဲကိုင်ထားရမယ့် ဓာတ်စာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်စာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆေးသောက်ဖို့ဆို ဝန်လေးတတ်တဲ့ ကြောက်တတ်တဲ့ လူကြီးတွေအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုမရှိဘဲ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
POMI T နဲ့ တူတူ ကျန်းမာပျော်ရွှင်အားရှိကြပါစို့..
Author: Dr Phyo